धर्मका नाममा अतिवाद, यसरी घोषणा गरियो ‘प्रभु’को राज्य ! – Online National Network
धर्मका नाममा अतिवाद, यसरी घोषणा गरियो ‘प्रभु’को राज्य !
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार ०१:५८
दाङ, २५ बैशाख – लमही बजारछेउमा चारतले ठूलो घरमा डेढ महिनाअघि ठूलो बोर्ड झुन्ड्याएर घोषणा गरियो ‘प्रभुको राज्य !’ बोर्डमा लेखिएको थियो, यहोवा (परमेश्वर) को राज्य । बाइबल अध्येताका अनुसार यहोवाको अर्थ परमेश्वर हो ।
यहोवा राज्य घोषणा भएपछि त्यो बस्ती आफ्नो कब्जामा परिसकेको भन्ने बाइबलमा उल्लेख छ । छिमेकीहरुले प्रभुको राज्य घोषणाको चर्को विरोध गरे । विरोधपछि बोर्ड हटाइएको छ । प्रभु राज्यका शासकहरु कहाँ बस्दारहेछन् त ? यो घरदेखि झन्डै पाँच सय मिटर पूर्वमा रहेको अत्याधुनिक घर शासकहरुको निवास रहेछ ।
रातो रङको तीनतले घरमा पुग्दा एक विदेशी युवक (प्रभु राज्यमध्येका एक शासक) गेटबाहिर निस्किए । आफूलाई जापानी नागरिक भनेर परिचय दिएका उनी नेपाली भाषा अस्पष्ट बोल्दा रहेछन् । पत्रकारको परिचय थाहा पाउनासाथ गोरो बर्णको उनको अनुहार एकाएक परिवर्तन भयो । आफू निकै ब्यस्त रहेको भन्दै उनले गेटभित्र छिर्न हतार गरे । संगीत अभ्यासका लागि जापानबाट लमही आएको बताएका ती युवकको दिनहुँको गतिविधि नजिकैको पसलेले देखिरहन्छन् ।
को हुन उनी ? पसल संचालिकाले भनिन, ‘क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा आएका रे, दिनहुँ धर्मको प्रचार बाँडेर गाउँगाउँ हिड्छन ।’ यो घर विगत २ वर्षदेखि प्रभुका शासकहरूको आश्रय स्थल बनेको रहेछ । बेलाबेलामा यो घरमा विदेशी नागरिकहरू फेरिइरहन्छन् ।
‘कहिले को कहिले को, नयाँ नयाँ अनुहारका विदेशीहरू आइरहन्छन्,’ ती सञ्चालिकाले भनिन्, ‘कोही कोरियाका हौँ भन्छन्, कसैले जापनीज भन्छन् ।’ प्रभुको राज्य र प्रभुका विदेशी शासकहरूको बडेमानको थलो पहिल्याएपछि प्रभुको शासनबारे खोजतलासको पछि लागियो । बग्रेल्ती अमानवीय घटनाहरूले यो पुष्टि गर्यो कि ‘प्रभुको शासन’ देउखुरीमा बलजफ्ती ढंगबाट चलिरहेको रहेछ ।’- नागरिक दैनिक